Thiha Swe၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
MaleShwe Pyi Thar, YangonMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ Thiha Swe's Likes Thiha Swe's ၏မိတ်ဆွေများ
Thiha Swe သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
လှိုင်ကျော်ထွေး leftacomment for Thiha Swe"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့…"Dec 19, 2012hla moe 24 leftacomment for Thiha Swe"ညီလေး အကိုလာလယ်ပါတယ် မတွေ့ တာကြာပြီ"Oct 28, 2012Thiha Swe postedastatus"ကုသိုလ် ဆိုတာ မိမိကိုယ်၌ကော သူတစ်ပါးပါ ချမ်းသာစေကြောင်းတရားလို့ထင်ပါတယ် . . ."Jul 29, 2012 0
Thiha Swe leftacomment for hla moe 24"ကိုကြီး လှမိုးရေ နေကောင်းတယ်နော်. ကျွန်တော်လာလည်သွားတယ် . . .မရောက်တာလည်းကြာပြီလေ . .အဲ့ဒါကြောင့် ဆွေးနွေးဝိုင်းမှာတောင် ၀င်ပြောရဲတဲ့သတ္တိမရှိတော့ဘူး . . အားလုံးက တော်တော်လေ့လာထားတဲ့သူတွေဆိုတော့ သူတို့နဲ့မပြောတတ်တော့ဘူး . . နောက်ဆုံးပြောရရင်…"Jul 25, 2012Thiha Swe သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။Jul 15, 2012Thiha Swe liked မျိုးနိုင်'s blog post 'မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ရုပ်နာမ်-သင်္ခါရ-အနိစ္စ တရားတော်'Jan 13, 2012hla moe 24 leftacomment for Thiha Swe"ဒို့ ညီအကိုတွေဘဲ နော်"Jan 10, 2012Thiha Swe leftacomment for hla moe 24"ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုလှမိုးရေ လာလည်ပေးတဲ့ အတွက် . . . . ."Jan 9, 2012Thiha Swe postedastatus"ကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေတဲ့ဗုဒ္ဒအဆုံးအမတစ်ခုကတော့ဘုရားရှင်တိုင်း ဟောကြားခဲ့ကြတဲ့ " မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား" ဆိုတာလေးပါပဲ"Jan 9, 2012 0
hla moe 24 leftacomment for Thiha Swe"ညီလေး လာလယ်ပါတယ်"Jan 7, 2012နီစံ (အနီ) leftacomment for Thiha Swe"မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
မိမိမေလ်းထဲမှ…"Jan 2, 2012whitecolor leftacomment for Thiha Swe"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
( ဤနေရာကိုကလစ်၍…"Jan 1, 2012Thiha Swe ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Jan 1, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
6:02pm အချိန်December 19, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
12:46pm အချိန်October 28, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီလေး အကိုလာလယ်ပါတယ် မတွေ့ တာကြာပြီ 7:00am အချိန်January 10, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဒို့ ညီအကိုတွေဘဲ နော် 6:10pm အချိန်January 7, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီလေး လာလယ်ပါတယ် 3:45am အချိန်January 2, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
တို့ကိုလည်းသွားရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ 11:57pm အချိန်January 1, 2012, တွင်whitecolor မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
Khin Myo Sint
Mg Thant Zin
Top News · Everything dimplemit leftacomment for kyawkyawwin"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"41 minutes agodimplemit leftacomment for maymoesander"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"41 minutes agoThet Thet Oo commented on thein wai's blog post 'ကိုယ့်သန္တာန်မှာ တရားရှိ၊ မရှိ၊ ဓမ္မမှတ်ကျောက်ပေါ် တင်ကြည့်ပါ။'"အဲဒီ အသိကိုပေးလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်"41 minutes agodimplemit leftacomment for Mg Thant Zin"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"42 minutes agodimplemit leftacomment for moemakha"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"42 minutes agodimplemit leftacomment for sabeioo"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"43 minutes agodimplemit leftacomment for ဆုလဲ့"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"44 minutes agodimplemit leftacomment for ဇင်မင်းဦး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"45 minutes agodimplemit leftacomment for ညီမင်းသူ"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"45 minutes agokyaemone shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookဝေဒနာနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မ46 minutes agokyaemone commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'ဝေဒနာနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မ'"လုပ်ချင်တာတွေထက်လုပ်သင့်တာကိုဦးစားပေးရမှာပါ
နာယူမှတ်သားရ၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"46 minutes agodimplemit leftacomment for ko chit nyunt"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"47 minutes ago More... RSS